Ungazi kanjani ukuthi ngabe ngivinjelwe kuWhatsApp | Izindaba zamagajethi
AmaVillamandos | | General, WhatsApp
I-WhatsApp uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olusetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi yize ezinye izinhlelo zokusebenza sezivele, zingcono kakhulu kunalezo eziphethwe yi-Facebook, ikwazile ukuhlala ingumdlali ovelele emakethe. Ngokuhamba kwesikhathi besikutshela izinto eziningi ngalolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo, kepha namhlanje sizokukhombisa iqhinga elingaphezu kokuthakazelisa.
Leli qhinga lihlobene namabhulokhi esiwathola kwabanye abasebenzisi, futhi alikho elinye ngaphandle kwalokhu wazi kanjani ukuthi ngivinjelwe ku-WhatsApp. Uma usola noma usaba, kubheke ngenye yezindlela esizophakamisa ngayo, ukuthi yebo, kufanele wazi ukuthi azithembekile ku-100%.
1 Idethi yokuxhumeka kokugcina
2 Mmemele eqenjini
3 Isithombe sephrofayela
4 Imilayezo ayamukelwa
5 Azame ukumshayela ucingo
6 Thatha iTelegram
7 Sebenzisa enye i-akhawunti ye-WhatsApp
Idethi yokuxhumeka kokugcina
Enye yezinto zokuqala okufanele ibhekwe usuku lokuxhumeka kokugcina, okuthi uma kwenzeka sivinjiwe singakwazi ukukubona. Ngezansi kwegama lomuntu ngamunye, usuku nesikhathi sokuxhumeka kokugcina kufanele kuvele. Uma lolu suku ludala kakhulu noma lungaveli, kungenzeka ukuthi lowo muntu usivimbile.
Ngeshwa leli qhinga belisebenza impela kuze kube yisikhathi esifushane esedlule, kepha manje noma yimuphi umsebenzisi akakwazi ukukhombisa usuku lokuxhumeka kokugcina, ngakho-ke shiya le ndlela yokubheka ukuthi ngabe basivimbele ku-WhatsApp sikhubazekile.
Bambalwa abantu abazi ngaleli qhinga futhi liqukethe ukudala iqembu noma ukusebenzisa okukodwa esinakho ukumema oxhumana naye esinokungabaza ngokusivimba. Uma sikwazi ukuyifaka ngaphandle kwenkinga lokhu kuzosho ukuthi ayisivimbanga futhi uma isikhombisa umyalezo wephutha kuzoba ukuthi isivimbile.
Umlayezo othize ovela uma kwenzeka lowo muntu esivimbile ulandelayo; "Iphutha lokungeza umbambiqhaza ”, bese lizositshela ukuthi“ Awunagunya lokungeza kulo oxhumana naye ”.
Inkomba enhle yokwazi ukuthi ngabe sivinjelwe ku-WhatsApp ukubuka isithombe sephrofayela. Kukhona abasebenzisi abangajwayele ukushintsha izithombe kaningi, kepha Uma ubukade ubuka isithombe esikhombisa uhlangothi esifanayo noma cha, kungaba yisibonakaliso esicacile sokuthi lowo oxhumana naye usivimbele.
Elinye iqhinga ongalisebenzisa ukuthola ukuthi ngabe oxhumana naye othile ukuvimbile yini ukubheka ukuthi bayayithola yini imilayezo esibathumela yona. Njalo uma uthumela umyalezo, kufanele kuvele izimpawu ezimbili zokuqinisekisa ukuthi umyalezo uthunyelwe futhi nomunye oxhumana naye uwutholile. Uma amamaki amabili nawo enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, kusho ukuthi uwufundile umyalezo.
Uma kwenzeka kuvela isheke elilodwa kuphela, kusho ukuthi amaseva e-WhatsApp athumele umyalezo, kepha oxhumana naye esiwuthumele kuye akawutholanga, ngoba kungaba ngaleso sikhathi ngaphandle kokuxhumeka kunethiwekhi yamanethiwekhi noma ngoba isivimbile. Ngeshwa le ndlela ayinaphutha, kepha ingaba usizo olukhulu kithina.
Azame ukumshayela ucingo
Izingcingo zezwi zitholakale isikhathi eside ku-WhatsApp. Enye indlela yokwazi ukuthi othintana naye usivimbile yini ukuzama ukubashayela ucingo, yize amanye amacala kungeyona indlela engenaphutha ngoba, ngokwesibonelo, ungazithola ungafakwanga ngaleso sikhathi.
Uma ushaya ucingo olulodwa noma ngaphezulu futhi alukho olukuvumelayo, lowo oxhumana naye ukuvimbele ngaphandle kokungabaza.
Abasebenzisi abaningi bavame ukuba nokufakwa kwemiyalezo esheshayo engaphezu kweyodwa efonini yethu, noma ngabe ezimweni eziningi sihlala sisebenzisa i-WhatsApp. Sebenzisa yocingo Kungaba yindlela enhle yokwazi uma oxhumana naye ekuvimbile ku-WhatsApp, futhi kungenzeka kakhulu ukuthi abakukuvimbelanga kulezi zinhlelo ezimbili, ikakhulukazi uma besanda kuvimba owesibili.
Uma, ngokwesibonelo, kuTelegram umbona ku-inthanethi futhi ubona yonke imininingwane yakhe, ngokungangabazeki ukuthi ukuvimbele ku-WhatsApp. Uma ungakwazi ukubona imininingwane yakhe noma isikhathi sakhe sokugcina sokuxhumeka, kungenzeka ukuthi uhlakaniphile kunalokho obukucabanga futhi ukuvimbele kuzo zonke izinhlelo zokusebenza.
Sebenzisa enye i-akhawunti ye-WhatsApp
Uma kungekho namanye amaqhinga esikukhombisile akusizile ukuthi wazi ukuthi oxhumana naye ukuvimbele ku-WhatsApp, unakho kuphela sebenzisa enye i-akhawunti yohlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo, nayo engavinjelwe.
Uma kungenzeka ukuthi le akhawunti ye-WhatsApp iqale ingxoxo nalo msebenzisi, ibone usuku lokugcina ukuxhumana noma ibone isithombe sephrofayela, ungaqinisekisa ukuthi uvinjelwe noma uqhubeka nokugcina ubudlelwano obuhle nomuntu umbuzo.
Zonke lezi ngezinye zezindlela esingazisebenzisa ukubheka ukuthi othintana naye othile we-WhatsApp usivimbele yini ukuze singakwazi ukuxhumana nabo. Ngeshwa, njengoba besilokhu siphinda, akukho nokukodwa okungenaphutha, ngakho-ke qaphela ukuthi uwasebenzisa kanjani futhi ikakhulukazi uma uzosho okuthile kulowo oxhumana naye obekucatshangwa ukuthi ukuvimbile.
Sethemba ukuthi uhlelo lokuthumela imiyalezo ngokushesha, kolunye lwezibuyekezo zalo ezilandelayo, luzokwenza kube lula kithina futhi lusibonise lolu lwazi ukuze kungadingeki ukuthi senze amasheke nokucabanga.
Ngabe ukwazile ukuthola ukuthi ngabe umuntu ukuvimbele ku-WhatsApp?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo. Sitshele nokuthi yimaphi amanye amaqhinga owasebenzisayo ukuthola ukuthi ngabe oxhumana naye ukuvimbile yini kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusheshayo olusetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungazi kanjani ukuthi ngivinjelwe ku-WhatsApp
Futhi ubani okhathalelayo?
Kuzoba nabantu engicabanga ukuthi yebo 😉
Idolobha laseMunich lizoshiya iLinux libuyele kuWindows